China Online Onyuswe Oxygen Imitha T6042 mveliso kunye nabenzi | Chunye
Imitha ye-Oxygen e-Intanethi ichithwe kwi-T6042
Imizi-mveliso ye-oksijini echithwe kwimizi-mveliso kukujonga iliso kumgangatho wamanzi kwi-intanethi kunye nesixhobo sokulawula nge-microprocessor. Isixhobo sixhotyiswe ngeentlobo ezahlukeneyo ze-oxygen sensors. Isetyenziswa ngokubanzi kwizityalo zamandla, ishishini le-petrochemical, i-metallurgical elektroniki, imigodi, ishishini lephepha, ukutya kunye nomzi mveliso weziselo, ukhuselo lwendalo kunyango lwamanzi, i-aquaculture namanye amashishini. Ixabiso leoksijini elinyibilikileyo kunye nexabiso lobushushu kwisisombululo samanzi zihlala zibekwe esweni kwaye zilawulwa.
Esi sixhobo sisixhobo esikhethekileyo sokufumana umxholo weoksijini kulwelo kulondolozo lokusingqongileyo lwamashishini amdaka. Inempawu zokuphendula ngokukhawuleza, uzinzo, ukuthembeka, kunye neendleko zokusebenzisa eziphantsi, ezisetyenziswa ngokubanzi kwizityalo zamanzi amakhulu, iitanki zomoya, i-aquaculture, kunye nonyango lokuhambisa amanzi amdaka.
85 ~ 265VAC ± 10%, 50 ± 1Hz, amandla ≤3W;
9 ~ 36VDC, ukusetyenziswa kwamandla≤3W;
I-oksijeni enyibilikisiweyo: 0 ~ 200ug / L, 0 ~ 20mg / L;
Uluhlu lokulinganisa olwenziwe ngokwezifiso, luboniswe kwiyunithi yeppm.
Imowudi yoLungiso-sandi lweSihambisi-zwi
Isibonisi esikhulu se-1.Large, unxibelelwano oluqhelekileyo lwe-485, kunye ne-alamu ekwi-intanethi nangaphandle kweintanethi, i-144 * 144 * 118mm ubukhulu bemitha, i-138 * 138mm ubungakanani bomngxunya, i-4.3 intshi enkulu yokubonisa isikrini.
Umsebenzi we-2 wokurekhoda kwedatha ufakiwe, umatshini uthatha indawo yokufunda imitha yokufunda, kwaye uluhlu lombuzo luchazwe ngokungathandabuzekiyo, ukuze idatha ingalahleki.
3.Khetha ngononophelo izinto kwaye ukhethe ngokungqongqo icandelo lesekethe ngalinye, eliphucula kakhulu uzinzo lwesekethe ngexesha lokusebenza kwexesha elide.
4.Ukuchaphazela okutsha kwebhodi yamandla kunokunciphisa ifuthe lokuphazamiseka kwe-electromagnetic, kwaye idatha izinzile ngakumbi.
5.Uyilo lomatshini wonke alunamanzi kwaye alunathuli, kwaye isiciko esingasemva sesiphelo soqhagamshelo songezwa ukwandisa ubomi benkonzo kwiindawo ezigadalala.
I-6.Panel / udonga / ufakelo lombhobho, zintathu iindlela ezikhoyo ezifumanekayo ukuhlangabezana neemfuno zofakelo lweendawo zoshishino ezahlukeneyo.
Unxibelelwano lwombane Unxibelelwano phakathi kwesixhobo kunye nesenzi: inikezelo yamandla, isignali yemveliso, ukudlulisa umnxeba nge-alamu kunye nokunxibelelana phakathi kwesenzi kunye nesixhobo konke kungaphakathi kwesixhobo. Ubude bocingo olukhokelayo lwe-elektrode esisigxina zihlala ziimitha ezi-5 ukuya kwezi-10, kwaye ileyibheli ehambelana nayo okanye umbala kwi-sensor Faka ucingo kwisiphelo esihambelanayo ngaphakathi kwesixhobo kwaye usiqinise.
Indlela yokufaka isixhobo
Uluhlu lwemilinganiselo 0 ~ 200ug / L, 0 ~ 20mg / L;
Iyunithi yokulinganisa mg / L; %
Isigqibo 0.01ug / L; 0.01mg / L;
Impazamo esisiseko I-1% yeFS
Ubushushu -10 ~ 150 ℃
Ukusonjululwa kobushushu 0.1 ℃
Ubushushu Impazamo esisiseko ± 0.3 ℃
Iziphumo zaNgoku 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, (ukuxhathisa umthwalo <750Ω)
Iziphumo zonxibelelwano I-RS485 MODBUS RTU
Ukudlulisa abafowunelwa 5A 240VAC, 5A 28VDC okanye 120VAC
Ukunikezelwa kwamandla (ukhetho) 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, ukusetyenziswa kwamandla≤3W
Iimeko zokusebenza Akukho siphazamiso sendawo yomazibuthe esomeleleyo ngaphandle kwentsimi ye-geomagnetic.
Lobushushu Working -10 ~ 60 ℃
Ubuntu bezizalwane ≤90%
Ixabiso le-IP IP65
Isixhobo sobunzima 0.8kg
Izixhobo zobukhulu I-144 × 144 × 118mm
Imilinganiselo yokufaka imingxunya 138 * 138mm
Iindlela zokufaka Iphaneli, i-Wall inyuswe, imibhobho
Isisombululo se-Oxygen esichithwe
Umzekelo No. CS4800
Indlela yokulinganisa Inkcazo
Izinto zezindlu 316 intsimbi engenasici
Ukulinganiswa kwamanzi IP68
Uluhlu lokulinganisa 0-20mg / L
Ukuchaneka I-1% yeFS
Uxinzelelo lweRange ~ 0.3Mpa
Ubushushu Imbuyekezo NTC10K
Uluhlu lwamaqondo obushushu 0-80 ℃
Ulungelelwaniso UkuLungiswa kwaManzi eAnaerobic kunye nokuLungiswa koMoya
Iindlela zokudibanisa Intambo engundoqo ye-4
Ubude beCandelo Intambo ye-5m esemgangathweni, inokwandiswa
Inkqubo yokufaka Uhlobo lokudibana
Ukusetyenziswa Isityalo samandla, amanzi okubilisa amanzi, njl
Egqithileyo Imitha ye-Oxygen echithwe kwi-Intanethi kwi-T4042
Okulandelayo: Imitha ye-Oxygen echithwe kwi-Intanethi kwi-T4040
Imitha ye-Oxygen ekwi-Intanethi
Imitha ye-Oxygen e-Intanethi ichithwe kwi-Intanethi T6046
Imitha ye-Oxygen e-Intanethi ichithwe kwi-Intanethi T6546
Imitha ye-Oxygen echithwe kwi-Intanethi kwi-T4040
Imitha ye-Oxygen e-Intanethi ichithwe kwi-Intanethi T6040
Imitha ye-Oxygen e-Intanethi ichithwe kwi-Intanethi T6540
Imitha ye-Oxygen echithwe kwi-Intanethi kwi-T4042
Ph woluvo Electrode, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Isilumko seChlorophyll, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo,